Mareykanka oo bilaabay qiimeynta cadeymaha rasmiga ee duqeyntii Gaalkacyo – STAR FM SOMALIA
Mareykanka oo bilaabay qiimeynta cadeymaha rasmiga ee duqeyntii Gaalkacyo
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay bilowday qiimeynta cadeymaha rasmiga ah ee ku aadan duqeyntii 28-kii bishii September ka dhacday duleedka magaalada Gaalkacyo.
War ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay si dhow ula shaqeyneyso dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maamulada Galmudug iyo Puntland, si looga hadlo walaaca la xiriira dhacdadii 28-kii September ee weerarkii is difaacida ahaa ee Mareykanka ka geystay Gaalkacyo.
Mareykanka ayaa sheegay inay ka war hayaan dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay duqeyntaas, isla markaana eedeymahaas si xooggan u qaatay
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka, hoggaanka sare ee bulshada iyo siyaasiyiinta koofurta Galkacyo iyo Madaxweynaha Galmudug C/kariin Guuleed.
Waxaa kaloo Safiirka wada hadal uu la yeeshay Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka.
Safiirka ayaa sheegay in wada hadaladaas uu ku saabsanaa in Mareykanka horumariyo xiriirka iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin ciidamada Galmudug iyo ciidanka qaranka Soomaaliya, si loola dagaallamo Al-Shabaab.
Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday maamulada Galmudug iyo Puntland in wada hadal dhab ah ka galaan khilaafka ka dhex jira, si loo gaaro nabad iyo dib u heshiisiin ballaaran.
Ugu dambeyn Mareykanka ayaa sheegay inay ka go’an tahay inay la shaqeeyaan dhamaan Soomaalida, si Soomaaliya u gaarto nabad iyo barwaaqo iyo ammaan.
Shabaab oo nin dhalinyaro ah ku toogtay Gobolka Galgaduud
Mareykanka oo Puntland & Galmudug ugu yeeray inay joojiyan colaadda Gaalkacyo